Ọkachamara ogologo mkpuchi anụ ụlọ anụ ụlọ nwere ezigbo onye nrụpụta na onye na-eweta arụmọrụ |Skylark
Ekwentị: +86 18908183680
Ọkachamara Long Coat Pet Conditioner nwere ọmarịcha arụmọrụ
Ngwaahịa ahụ nwere ike sachapụ ihe fọdụrụ nke ọma wee banye n'ime epidermis, mee ka combability dị nro na nkụ dị mma, ma kwalite mmetụta moisturize nke ntutu.
Gburugburu ụwaonye na-ere ahịa, onye na-ere ahịanaemeputangwaahịa nhicha & nlekọta anụ ụlọ dị elu.Anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa Logo gị dịka ihe ị chọrọ.Anyị na-elekwasị anya n'inye ngwaahịa dị mma, enyi na gburugburu ebe obibi, àgwà dị elu, na-etinye uche.
Uwe ogologoIhe mkpuchi anụ ụlọ
Ụdị ọ bụla nke nwamba na nkịta ogologo uwe
Maka ịsa ahụ ogologo uwe nwamba na nkịta nke ụdị ọ bụla.
BOURENA Long Coat Pet Conditioner bụ “pet-centric” ọmarịcha ngwaahịa na-eju ụkpụrụ EU na-enweghị agba, mmanụ silicon.Ngwaahịa ahụ nwere ike kpochapu ihe fọdụrụ na nke ọma ma banye n'ime epidermis, welie combability dị nro na nke akọrọ na-enweghị nro ntutu anụ ụlọ., Nke na-eme ka ntutu dị mma dịkwuo mma.N'otu oge ahụ, ọ na-abanye na stratum corneum iji rụkwaa mgbawa dị n'ime ma kwalite mmetụta moisturize nke ntutu isi.
1. Ekwesịrị iji ihe mkpuchi anụ ụlọ BOURENA mee ihe mgbe ejirichara BOURENA ncha ntutu ma ọ bụ ncha ntutu ndị ọzọ.
2. Ghichaa ihe mkpuchi na mmiri na nha nke 1: 8 n'ime mmiri ara ehi, wụsa ya n'ọbụ aka gị.
3. Tinye diluent ozugbo na ntutu ma tinye ya na ntutu isi gị maka nkeji 3.
4. Jiri mmiri ọkụ na-ekpochapụ iji wepụ ihe fọdụrụ na ncha ntutu.
5. Ghichaa ntutu gị na ụdị gị n'ụzọ nkịtị.
A na-atụ aro ka eji ngwaahịa a na-eji shampoo anụ ụlọ BOURENA dabara na ogologo ntutu na agba ntutu ya maka nsonaazụ kacha mma.
● Biko hichaa ntutu anụ ụlọ kpamkpam mgbe ị na-asa ahụ iji gbochie anụ ụlọ ịracha ihe fọdụrụ ma ọ bụ metụ anya.Ịracha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oke nwere ike ịkpata mgbakasị ahụ nke tract digestive wee mee ka anụ ụlọ kpọrọ nkụ.
Q: Kedu ka m ga-esi nweta ụfọdụ sample?
Q: Olee otú gị factory ime banyere àgwà akara?
Nke gara aga: Ọkachamara Short Coat Pet Conditioner nwere ọmarịcha arụmọrụ
Osote: Onye na-arụ ọrụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma na-arụ ọrụ nke ọma
nkịta ịsa ahụ
Ihe mkpuchi anụ ụlọ
ịsa ahụ anụ ụlọ
Ọkachamara Pet Coat Smooth Liquid nwere Excell…
Ọkachamara Short Coat Pet Shampoo nwere Excell…
Ọkachamara Long Coat Pet Shampoo nwere ọmarịcha…
Ọkachamara Short Coat Pet Conditioner na Ex...
Ọkachamara Pet Foot Cleaning Foam With Excell...